Siyaasiyiinta Majeerteen iyo Faysal Cali Waraabe oo kulmay | allsanaag
Ra’isul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya oo la kulmay Faysal Cali Waraabe .
Fashilkii siyaasadeed ee ku dhacay siyaasiyiinta Majeerteen ee ahaa inay ku guul daraystaan hogaanka sare ee Soomaaliya, iyagoo Jaran jaro ka dhiganaya maamulka Puntland, ayaa in badan oo ka mid ah Soomaalida waxay sugayeen halka ay u jihayn doonaan siyaasaddooda, mar haddii beelaha Koonfureed ay cunaqabatayn ku soo rogeen.
In badan oo Soomaalida ka mid ah ayaa maanta indhaha ku kala qaaday sawir laga soo qaaday Kulan Ay magaalada Nairobi ku wada yeesheen Labo Raisul wasaare ee Soomaaliya Soo maray, isla markaana mid ka mid ahi uu soo noqday Madaxweynaha maamulka Puntland iyo hogaamiyaha beelaha Garxejis , ee aadka ugu ololeeya in Dhulbahante iyo Warsangeli ay ka guuraan degaanadooda oo beesha Isaaq dhulku u harayo
Kulanka ay Cabdiweli Gaas iyo Cumar Cabdirashiid ay la kulmeen Faysal Waraabe ayaa gef iyo dhabarka oo laga toogtay ku ah beelaha Warsangeli iyo Dhulbahante ee reer Puntland ee dhiigooda u daadinaya midnimada iyo wada jirka Puntland Puntland
Labada Beelood ayaa qofka ka soo jeeda beelahooda oo la shaqaysta maamulka uu Faysal Cali Waraabe ee Somaliland canbaareeya mararka qaarkoodna dhiig ayaaba ku daata si looga difaaco maamulka Puntland.
Edeb daradan iyo jees jeeskan ay ku kaceen labadan siyaasi ee Majeerteen waxay soo celinaysaa xasuustii xasuuqii laga gaystay Buuraha Calmadow, xilligii ay labadan nin madaxda ka ahaayeen Soomaaliya , Xasuuqaas oo garab ka helayey Maamulka Faysal Cali Waraabe,
Cumar Cabdirashii dagaalkii Jufooyinka beeshiisa Cismaan Maxamuud ee Bah dir iyo Bah Dhulbahante, xanaaqii uu ka qaaday Deni iyo Bah Dhulbahante ilaa hadda ma hor fariisan Deni.
Allah ha u bxariistee Qaadi Mire Muuse Cali, oo ka soo jeeda beesha Warsangeli isaga oo midnimada Soomaaliya difaacaya, sharafta beesha Dhulbahante Difaacaya, kula dagaalamaya magaalada Tukaraq maleeshiyaadka Faysal cali Waraabe ayuu geeriyooday. Maalintaas Gaas ayaa madaxweyne ka ahaa Puntland, hal talaabo ma qaadin.
Ugu danbayntii sidaad la socotaan dhowaan Qurba joogta, aqoonyahanada iyo waxgaradka Beesha Warsabgeli si isku mid ah waxay uga soo wada hor jeesteen oo fashiliyeen qorshe la doonayey in Puntland lagu kala qaybiyo, oo ay balan qaadyo wadeen hogaanka Beesha Isaaq ee Habar awal.
Sidaas awgeed Isimada Majeerteen waxgaradkooda waxa laga sugayaa inay arintan ka hadlaan oo ay canbaareeyaan. raalina ka bixiyaan kuwooda liita ee garabka siinaya cadowga Puntland, reer Puntland kala qaybinaya.
← R’aisal wasaaraha magcaaban oo la kulmay madax hore Deni oo guddoomiyay shirka Golaha Wasiirada →
3 thoughts on “Siyaasiyiinta Majeerteen iyo Faysal Cali Waraabe oo kulmay”
Jirac June 22, 2022 at 23:05
Laa ilaaha ilaa laahu Muxadan Rasuul Alaah:
Maanta nin aan ogahay ilaahay ha u naxariistee haduu noolaan lahaa wuxuu ina oran lahaa “TAKE THEM TO THE GALLOWS” oo ilaah ogyahay. Yaah qofka ugu horeeya oo cambaareynaya waa “ANIGA” inkastoo dadkii iyo deegaan kii isbedalay oo maanta “Dowlado gacmaha kula jiraan oo midkastaa interest giisa wato hadana waa muhiim in “Puntland wada jirkeeda iyo xasiloonidedda siyaasadeed la wada ilaashado. Gaas iyo OMAR ABDIRASHID waa iga fashil hadayba hor fareesteen “FAISAL FATAAL” hadayba cid beesha Isaaq hor fariisanayaan waxaa u dhaantay warlords MUSE SAAMURI IYO INA KAAHIN.
Omar Abdirashid waa ninkaan u wadnay inuu las’anod tago oo ka soo duceeyo. Gaas waa ninkaan ku xisaabtameynay inuu dalka Somalia 🇸🇴 mar hogaan ka u qabto khibradiisa siyaasadeed awadeed si ba’an bay ugu fashilmeen xalintii “PSF” oo ilaa hada ah Security Hazard mar hadii nimankii gacanta ku hayey tageen ciidanka tiradaas iyo tayadaas u leh Puntland soona hoos keeni waayeen ciidanka Darawishta Puntland oo ah ciidan ka kali ah ee Puntland qaabilaan Security geeda dhinac kasta marka laga reebo police ka iyo asluubta. Insha Alaah Puntland Security Forces wuxuu ku noqon doonaan 1st structure of 1998 sidii loo design gareeyey waxa kale oo dhan qashin kaan ku dareynaa ciidan aan “DARAAWIISHTA” aheyn ma yeelan karto PMPF,PSF, PIS, POLICE INTELEGENCE+ MILITRY POLICE. dhamaan waxaay hoos imaanayaan “TALIYAHA GUUD EE CIIDANKA DARAAWIISHTA PUNTLAND IYO MADAXWEYNEHA” big Security reform oo ah kii 1aad waxa kale oo dhan “Dismantle” weeye. Insha Alaah reform weyn ba’an PUNTLAND la rabnaa maadaama “MAAMULKII HANAQAADAY” ojeedooyinkii loo Dhisayna Intoodii badneyd hadafkoodii la gaaray oo ay #1 ka aheyd in dowlad nimadii Somaliyeed ee USC IYO SNM godka ku rideen godka laga soo saaro. #2. Anaka inaynu ka xisaabtano marka maamulku hana qaado “1991-1983” aan dib idiin xusuusiyee 1991 waa wixii loogu walqalay “DIBIRGOYNTA DAAROOD EE SOMALI OO DHAN LAGU GOWRACAY” 1993 waa BILAABASHADII SHAATIGA SHAYDAAN KA iyadoo loo madlan yahay in la dhiso maamulka Puntland SHIDADIINA GALKAYO na lagu mashquul sanaa ayaa SNM IYO USC hubeysan oo Geshan Shaati Diineed lagu war helay iyakoo BOSSASO DEQA dhex taagan Garowe na argagixiyeen. YAAH ma fahmeysaan SNM dhexdooda ayey isdilayeen hal mar bay soo xawileen.
Maanta waxaa ii cadaatay EREYGII WAA INOO 30 SANO IN BEESHA ISAAQ FULISAY. Iyagoo Ganacsigoodiina si fiican ugu bulaalay Puntland argagixasadana si fican u fund gareeya.
Geba gebadii DENI IYO KARASH eed ma leh wax yar baa haray hala dul qaato “DHAMAAN SIYAASIINTII HORE IYO KUWA HADA JOOGA WAY BANEYNAYAAN WALIBA SI NABAD GELYO AH INSHA ALAAH.
Jirac June 23, 2022 at 01:14
Qaraxii xiligii GAAS Raisul wasaaraha ahaa ee Faisal Fataal inanta u soo diray miyey ka wada hadlayaan arinkan ay ka wada hadlayaan si fiican ha loo soo baaro u maleyn maayo Faisal Fataal igu SAWIR oo tus MUUSE SAAMIRI IYO WARLORD INA KAAHIN inay tahay wax badan baynu u baahanahay inaynu ka ogaano ujeedada laga leeyahay.
Abdi June 23, 2022 at 01:32
Majeerteen maxaad ugu hal qabsanaysaan waxyohow gunta ahi, mj, mj mj mj mj, cusbataalo laydinku daweeyo raadsada, xaasidnimadu waa waxa guryihiina loo haysto adinkuna sidii tukihii dhirta dusheeda ka qayliya weligiin.